छोरी पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले - टि. एल. एन पोस्ट
Home मनोरञ्जन छोरी पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले
प्रियंका कार्की नेपाली ग्ल्यामर फिल्डमा चर्चित नाम हो। कुनै न कुनै रुपमा प्रियंकाको चर्चा भैरहन्छ। चलचित्र क्षेत्र ठप्प भएपनि प्रियंकाको चर्चा भने चुलिदो छ। बेलाबेलामा आफ्नो गर्भवती अवस्थाको फ़ोटोसुटका कारण सामाजिक संजालमा उनको निकै आलोचना पनि हुने गर्दछ।
पछिल्लो समय उनी आफ्नो युट्युब च्यानलमा व्यस्त छिन। तीन लाख एकचालीस हजार भन्दा बढि सब्स्क्राईबर भएको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट आफ्ना गतिबिधि शेयर गरिरहन्छिन। हिजो मात्र पनि उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमा नयाँ भिडियो अपलोड गरिन। जसको टाईटल नै बेबी नर्सरी फुल टुर छ या न कि उनले आफ्नो बच्चाको लागि छुट्ठै कोठा बनाईदीसकेकि छन्।
बच्चा नजन्मिदै उनीहरुले आफ्नो बच्चाको नाम आयंका राखिसकेका छन् भने आयंकाको नामबाट फाउन्डेसन पनि खोली सकेका छन्। भिडियोमा आयंकाको कोठा सेट गर्दाको सबै कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। कार्पेटिङ्ग, पर्दा फ़िटिङ्ग, दराज फ़िटिङ्ग तथा बेड सबै सेट गरिएको भिडियोमा देखाईएको छ।
बिभिन्न शुभचिन्तकहरुले दीएको उपहार कोठामा सजाईएको छ। दराजमा टन्न छोरीका लागि कडा सजाईएको छ अहिले को लागि मात्र हॊईन २-४ बर्ष पछिको लागि समेत , खेलौना सजाईएको छ , जुत्ताहरु सजाईएको छ। कपडा र खेलौना मात्र होईन बच्चाका लागि डाईपर समेत जोहो भैसकेको छ।
हुन त आफ्नो बच्चा जन्मिदै छ कुन कसको बुवा आमा खुशी हुदैन र कसले भविष्यको तयारि गर्दैन र तर प्रियंकाको तयारि हेर्दा चाहिं छोरा जन्मिने कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले भन्ने उखाको चाहि पक्कै याद आउछ।
Next articleइन्गेजमेन्ट अघि नै कलाकार जोडीको दुर्घटनामा निधन
पृथ्वी नारायण शाहका प्रेरक भनाईहरु